Kancane kancane, abantu abaningi ushiye ehhovisi ukuntanta ngokukhululekile okungaphansi kwenkululeko umsebenzi online. Lokhu kuholela yokuthi kukhona umsebenzi online, okuyinto futhi kudingeka aqeqeshwe. Uma phambi ochwepheshe Inthanethi wafunda konke ngokwenza amaphutha, kodwa manje kungenziwa emayunivesithi inthanethi, futhi ekupheleni uthole isitifiketi isimo. Omunye wabo - "amaqembu Netologiya" izibuyekezo bathi yokufunda inthanethi - ithuluzi eliphumelelayo bathuthukise amakhono abo noma athole umsebenzi omusha.
Online ukuqeqeshwa - kuyini?
Namuhla ukuqeqeshwa inthanethi - esincintisana njengabakufanelekele ukuhlaziswa bendabuko eyunivesithi, njengoba kuhlosiwe ukuxazulula izinkinga ngawo inqubo ekilasini akakwazi ukubhekana ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha ubuchwepheshe. Nazi ezinye imisebenzi amanyuvesi inthanethi:
izindlela ephelelwe yisikhathi ukusebenza ngolwazi;
yokuntuleka abafundisi abafaneleka;
impahla HHAYI efanele.
Ngo-intanethi embundwini ongaphakeme ukungena yenqubo yokufunda, ngoba ukuvumela ukuba ngokushesha uqeqeshe komunye umsebenzi kwesinye futhi uthole ulwazi ngokwanele olufanele kanye namakhono. Ukuvumelana nezimo, individualization yenqubo yokufunda uvumele amanyuvesi inthanethi ukuze abe esincintisana njengabakufanelekele ukuhlaziswa the classic wehlelo lefundo zombelele.
Esikhathini esizayo, kwenza kube nokwenzeka ukuba iphothule esikoleni nge amamaki aphakeme ukuze uthole umsebenzi ezinkampanini ezinkulu. Ngenxa yalokho, ugqozi kwangaphandle izinto ezifana impi, nesifiso diploma ngoba zonke okulungiselelwa, noma ukuthola owawuholela umsebenzi sibonga "uqweqwe" esikhathini esizayo kuthathelwe indawo ugqozi yangaphakathi, lapho umuntu ofuna ukufunda, njengoba ubona amathemba yangempela.
Izinzuzo Online Learning
Ukufunda ku-intanethi unezinhloso eziningi eziwusizo:
ukutholakala kunoma yimuphi umuntu, kungakhathaliseki isimo sakhe sempilo kanye nobudala;
ikhono ukurekhoda amaseshini ocingweni, noma ithebhulethi, noma i-laptop uma ulahlekile;
ukonga isikhathi, ezezimali kanye nokwenzeka Wavuma imisebenzi yansuku zonke;
individualization of inqubo yemfundo, okuvumela ukufunda ngokuhambisana nezinga labo ulwazi kanye ijubane okuqonda;
ikhono ukhethe ulwazi abaludingayo;
ukufinyelela okulula ibanga yokwaziswa imithombo.
Okumbi yebanga ohlelweni lwezemfundo
Naphezu kokuba sobala yokufunda intanethi unezinhloso ezithile:
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ukuthintana ngqo uthisha kanye nabanye abafundi ibangela abafundi umuzwa wokuba nesizungu nokuba kuholela ugqozi ongaphakeme, ngoba akekho ukuqhathanisa izimpumelelo zabo.
Ukuthuthukiswa nokuqaliswa izifundo inthanethi ibiza kuka indlela evamile. Lokhu kungenxa isidingo umphelelisi impahla theory ngesimo emagrafu vidiyo.
Isidingo sokuba intando enamandla ukuzithiba ukulungiselela amakilasi.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela noma kancane kakhulu inthanethi.
Isidingo Ochwepheshe nasemikhakheni Inthanethi kuholela amanyuvesi inthanethi, enye yazo - ". Amaqembu Netologiya" Le phrojekthi inikeza ukuqeqeshwa okusekelwe isiqophi izifundo Intensives, ezisiza ngokushesha aqale ukusebenza iphrojekthi sakhe, njengoba abafundi abaphothule engenalo ulwazi olwanele ezentuthuko kanye inzuzo.
izifundo eziningi ezihlobene ukumaketha kanye nokugqugquzela kwi-inthanethi. Iziqu "amaqembu Netologiya", okuyinto libuyekeza kungaba ezitholakala kungenziwa kokubili inthanethi in the domain yomphakathi, uthi ngesikhathi intengo futhi ukuthenga okungabizi amanani kanye high value abo ulwazi.
Yini ehlukanisa inqubo yemfundo emayunivesithi enqubeni okungaxhunyiwe ku-intanethi umthombo "Netologiya"? Imfundo eyakhelwe ngokugcwele ukufinyelela ku-intanethi, ngakho-ke okuyiyona akuyona kuphela izibaya nezincwadi, kodwa futhi idivayisi nge ukufinyelela World Wide Web. Inqubo yemfundo has izinhlobo ezintathu:
Online izifundo - izifundo isiqophi ofika kumaminithi angu-5-20, okuhlanganisa theory kanye umkhuba. Leli fomu kuyasiza ukufunda kangcono impahla kanye ukukulungisa.
Fundzisisa - Webinar ofika kumaminithi angu-60-120. Buhle ifomu yokuthi bangakwazi ukukhulumisana nathishela futhi ubuze imibuzo.
Vula amakilasi avumele ukuthola umbono ochwepheshe on ezihlukahlukene ezinehuha nokusiza lokukhetha inkambo.
Yini enye engase ishiwo izinhlobo zemfundo inqubo ezinsiza "Netologiya"? Izibuyekezo mayelana ukuqeqeshwa lapha bethi mnandi futhi kuphumelele kangcono kunendlela evamile ekilasini fomu. Lokhu kungenxa yokuthi izinto zenziwe ezithakazelisayo, futhi ungakwazi ukuyibuka nganoma yisiphi isikhathi isiphequluli evamile, bese ukuthatha isivivinyo, futhi kuphela ngemva kokuba zonke tutorials isiqophi inkambo kudlule ukuhlolwa kokugcina. It kuncike Imiphumela, uthola isitifiketi noma cha.
Dlulisa amehlo Izifundo "Netologii"
Okwamanje, "Netologiya" ukuqeqeshwa Yiqiniso okuhlose ububanzi ukuphathwa, ukuphathwa project, umklamo kanye izinhlelo, uye waqeqesha izinhlelo ezingaphezu kuka-120.
ukuphathwa Izifundo Inthanethi okuhloswe ngaso ukujwayelaniswa ne ukumaketha yendabuko kanye ukukhuthazwa imvelo digital evumela ukuthi wena ukwakha nokumaketha isu lebhizinisi ngokusebenzisa amathuluzi yesimanje nakuzingxenyekazi.
iphrojekthi ukuphathwa izifundo ukunikeza ulwazi emkhakheni ukukhuthazwa amaphrojekthi Inthanethi, ukuthuthukiswa kwabo nokuphatha.
design izifundo kuhloswe asathuthuka amakhono ngamathuluzi ukuthuthukisa UX-kwesu lokuqhubekisela iphrojekthi.
Programming izifundo bafundiswa intuthuko professional amakhasi ewebhu, isakhiwo sabo futhi isakhiwo, kanye nekhodi design zabo besebenzisa ethandwa izilimi izinhlelo.
Izinzuzo online yokufunda ezinsiza "Netologiya"
Uma kuqhathaniswa nezinye izinto izinsiza kanye nemikhiqizo ulwazi kusuka website "Netologiya" (izifundo), okuyinto libuyekeza ikakhulukazi, kunezibonelo ezinhle eziningi eziwusizo:
Ukuqeqeshwa uqhutshwa ngesisekelo ilayisensi isimo, futhi ngenxa yimpumelelo ukuhlolwa abathweswe iziqu ukuthola isitifiketi eziphambili ukuqeqeshwa gosobraztsa.
Okuhle Yiqiniso isakhiwo, izicucu adlulayo imizuzu engu-5 kuya kwengu-20, ukuwabuka kuphi lapho uziphumulele.
High izinga izifundo ngaphandle "amanzi", ngokungafani nezinye imikhiqizo ulwazi, ngoba zenziwa ochwepheshe.
Yiqiniso ngamunye - kweyunithi ezizimele, ngemva kwalokho ayidingi okufana eliqinisekisiwe ngokujulile.
Isayithi "Netologiya" platform Izibuyekezo abafundi ukuba bakhulume ngalezi izinzuzo:
interface enembile kwenza kube lula futhi ukhululekile ukuba simazi ne Yiqiniso, ukuthatha amanothi ukuhlolwa;
isisetshenziswa friendly ngenxa abasebenzi ngemfundiso kanye technical support.
Ukuze izifundo intanethi phrojekthi isebenzisa isimiso se-inyanga, izinyanga 3 kanye ngonyaka, ngemuva kokukhokha lapho umsebenzisi likwazi ukufinyelela kunoma okokufundisa kumtfombolusito. On intensives okubhaliselwe akusebenzi - wonke umuntu inenani ukuthi kuncike kuye. Njengoba amakilasi evulekile, bakhululekile. University iziqu "Netologiya", okuyinto Izibuyekezo bayabonga ukuqeqeshwa, kululekwa ukuthenga subscription ngenyanga, okuvumela ukulinganisa umthombo kuya ngokugcwele.
A ezahlukene izifundo kwenza inyuvesi inthanethi "Netologiya" omunye izingxenyekazi ezithandwa kakhulu ekufundeni. Kodwa ingabe sikhona umqondo ukuthi ngikhiphe inkongozelo ukufunda lapha? Kufanele ufunde nemibono abaneziqu zaseyunivesithi "Netologiya". Izibuyekezo of the izifundo lenkonzo, futhi, kakhulu.
Naphezu kweqiniso lokuthi ingcebo Positioning ukutholakala kwezinhlelo kusuka ezingeni ekuthuthukeni okuyisisekelo, isiqophi izifundo ngenxa yokugcina liphansi kakhulu: 6 - I-oluseqophelweni 32 - I-level Lesisemkhatsini (ngesikhathi sokubhala), okuyinto lincane kakhulu uma liqhathaniswa izilinganiso lekufa. Lokhu kuveza isiteji ewusizo kulabo ukwenza izinyathelo kuqala ubuchwepheshe inthanethi. Kuyasiza ukuthi Yiqiniso ngamunye has eziningi impendulo emihle noma emibi, etshela mayelana yini noma cha ukuthenga noma cha.
Bathola ukuthi kungcono bhalisa ngenyanga, okuzokwenza ukuya ngqo ukuqeqeshwa ukuhlola ngebuhle nebubi wokuphila, ngokusekelwe izintandokazi zabo.